किसानको पैसामा कृषिका हाकिमको विदेशमा रजाइँ, अर्को टोली उड्ने तयारीमा
काठमाडौं, २ फागुन- नेपाली किसानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भनेर विभिन्न दातृ निकायले दिएको पैसा बोकेर कृषि विकास मन्त्रालय अधिकारीहरु विदेश सयरमा छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालका सचिवसहित १० जनाको टोली अहिले अष्ट्रेलियाको भ्रमणमा छ । माघ २५ गते अष्ट्रेलिया उडेको उक्त टोली फागुन ३ गते स्वदेश फर्किने छ ।
टोलीमा कृषि विकास मन्त्रालय सचिव डा. सुरोज पोखरेल सहित कृषि विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम शर्मा, कृषि विकास मन्त्रालयका सह-सचिव योगेन्द्र कार्की लगायत छन् ।
किसानका लागि उन्नत जातको बिउ बिजन उत्पादन गर्ने, सिफारिस गर्ने लगायतका लागि सञ्चालित (किसानका लागि उन्नत बिउ विजन) कार्यक्रमको खर्चमा सचिवसहितको टोली अष्ट्रेलिया गएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आईएफएडी)को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालित उक्त परियानाको मुख्य उद्देश्य उन्नत जातका बिउ बिजनबारे अध्ययन गरी उत्पादन गर्ने र किसानका लागि सिफारिस गर्ने हो । ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट भएको उक्त योजना आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि शुरु भएको थियो । योजनाको म्याद आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्मका लागि छ ।
भ्रमणमै ५० लाख स्वाहा
कृषि सचिव पोखरेलसहित १० जनाको टोलीले अष्ट्रेलिया भ्रमणमा ५० लाख रुपैयाँ सक्ने छ । किसानका लागि उन्नत बिउ विजन कार्यक्रमका उप–निर्देशक तुल्सी राम भण्डारीले भ्रमणका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको बताए ।
उन्नत जातका बिउ विजन उत्पादनका लागि अष्ट्रेलियामा भएका प्रयासको अध्ययन गरेर टोली फर्कने उनको भनाइ छ ।
तर कृषि विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी सचिवसहितको टोली विना उद्देश्य विदेश भ्रमणमा निस्किएको बताउँछन् । ‘अष्ट्रेलियामा भएका प्रयास नेपालमा लागू गर्न सकिने अवस्था नै छैन । अष्ट्रेलिया र नेपालको हावा–पानी नै मिल्दैन । हावा–पानी नै नमिल्ने ठाउँमा अपनाइएको विधि अपनाएर यहाँ के नतिजा निस्किन्छ ?’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘यो भ्रमण रामाइलो गर्ने उद्देश्यले मात्रै गरिएको हो । भ्रमणबाट किसानका लागि आएको बजेटको दुरुपयोग भएको छ ।’
४० लाख सक्न अर्को टोली तयार !
सचिव पोखरेलसहितको टोली अष्ट्रेलियामै रहेको बेला कृषि विकास मन्त्रालयकै अर्को टोली विदेश उड्ने तयारीमा छ । १० जना सदस्य रहेको यो टोली पनि अष्ट्रेलिया नै जाने छ ।
यो टोली जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाको बजेटमा अष्ट्रेलिया जान लागेको हो । टोली अष्ट्रेलियाको सिड्नी र मेलबर्नका विभिन्न कार्यक्रममा सभागी हुने जनाइएको छ ।
फागुन ७ र ८ तथा १० र ११ गते हुने दुई छुट्टा–छुट्टै कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि विकास मन्त्रालयका सह–सचिव लेखनाथ आचार्य नेतृत्वको टोली अष्ट्रेलिया उड्न लागेको हो । टोलीमा उपसचिव खिमानन्द भुषाल, क्षेत्रीय कृषी निर्देशनालय दिपायलका बरिष्ठ योजना अधिकृत पशुपति पोख्रेललगायत १० जना छन् ।
यो टोलीको भ्रमणमा ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने छ । जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाका निर्देशक शिवनन्दन सााहले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत नै कृषि विकास मन्त्रालयको टोली विदेश भ्रमणमा जान लागेको बताए ।
‘जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको असर र त्यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे जानकारी हासिल गर्न कृषि विकास मन्त्रालयको टोली विदेश भ्रमणमा जान लागेको हो,’ निर्देशक साहले लोकान्तरसँग भने, ‘यो भ्रमणबाट कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने उपायबाट विभिन्न जानकारी हासिल हुने छ ।’
विश्व बैंकको ६० करोडको अनुदानमा आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि शुरु भएको यो परियोजना आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सकिदै छ । जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा परेको असर कम गर्न शुरु भएको परियोजनाको धेरै रकम भने कर्मचारीको विदेश भ्रमणमै सकिएको छ ।
परियोजना शुरु भएयता विदेश भ्रमणमा मात्रै ४ करोड खर्च भइसकेको छ । परियोजनाको खर्चमा अहिलेसम्म कृषि विकास मन्त्रालयक कर्मचारीले भारत, थाइल्याण्ड, अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड लगायत देशको भ्रमण गरिसकेका छन् ।